सानाे कामले सदरमुकाम धाउनु पर्ने बाध्यता हटेकाे छ- गाउँपालिका अध्यक्ष लामा – Darshankhabar
मुगु । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रुपमा चिनिन्छ । जिल्लामा एक नगरपालिकासहित तीनवटा गाउँपालिका छन् । मुगुका अन्य स्थानीय तहभन्दा मुगूम कार्मरोङ गाउँपालिका पर्यटन हिसाबले भरिपूणर्, बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बाको भण्डार मानिन्छ । यहाँ लामा समुदायको बाहुल्यता छ । जडीबुटी र पर्यटनबाट गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने पालिकाको मुख्य लक्ष्यसहित पालिकाले पूर्वाधारमा फड्को मारेको छ । भौगोलिक हिसाबले अन्य स्थानीय तहभन्दा यो गाउँपालिका ठूलो छ । जडीबुटी व्यापार, पर्यटन, कृषि र पशुपालनको उच्च सम्भावना बोकेको यो गाउँपालिकामा आवाश्यक नीति तथा कार्यक्रमको खाँचो छ ।
देश संघीयतामा गएको चार वर्ष बितिसकेको छ । तीन सरकारमध्ये नजिकको स्थानीय सरकारले निर्वाचनताका जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम भयो त ? चार वर्षमा पालिकाले उल्लेखनिय कार्य के भयो ? यिनै विविध विषयमा केन्द्रित भएर गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामासँग खड्क सुनारले गरेको कुराकानी ।
यस्तै विभिन्न समस्यासँगै विकास निर्माणका काम गर्दै अगाडि बढेका छौं । तीन वर्षमा जनताका मागअनुसार विकास गरियो । चार वर्षमा आइपुग्दा बाँकी रहेका विकास खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारमा गाउँपालिकाको ध्यान केन्द्रित भएको छ । गाउँपालिकाको मुख्य समस्या भनेकै सञ्चार थियो । अहिले पालिकावासी सञ्चारको पहुँचमा छन् । किंम्रिमा फोरजीसहितको टावर निर्माण हुँदैछ । पालिकाका ११ वटै वडामा साविकका पाँचवटा गाविसमा वडा कार्यालय बनाइयो । सामुदायिक स्वास्थ्य भवन निर्माण भए । रिउस बगरमा कोभिड-१९ लाई लक्षित गर्दे १० शैयाको अस्पताल निर्माण भयो । गाउँगाउँमा खानेपानी पुग्यो । जिल्लाका चारवटा स्थानीय तहमध्ये पहिलोपटक हाम्रो पालिकाको सबै शाखा रहने गरी प्रशासनिक भवन निर्माण गर्यौं ।
लकडाउनले विकासमा कत्तिको असर पार्याे ?
विश्वमै महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले हाम्रो गाउँपालिकामा पनि असर परेको छ । यसले गर्दा लकडाउनको बेला जेजे गर्नुपर्ने काम थिए, त्यो गर्न सकिएन । गाउँसभाबाट दर्जनौ योजनासहित बजेट विनियोजित भएको थियो । तर लकडाउन र कोभिडले गर्दा सबै काम गर्न सकिएन । अब तिनै अधुरा योजना पुनर्निर्माणमगर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ । बाँकी चालू आवका योजना छिट्टै सम्पन्न हुनेछन् ।
भूगोलसँगै कृषि, पशुपालन व्यवसाय, जडीबुटी, सांस्कृतिक रीतिरिवाज र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो । यहाँ कृषिका लागि खेतीयोग्य जमिन पनि उत्तिकै छ । विश्वकै बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा यसै गाउँपालिकाको पाटनमा पाइन्छ । विश्वकै चार धाममध्ये छायाँनाथ धाम पनि हाम्रै गाउँपालिकामा पर्छ । कणर्ालीका जिल्लाका साथै बझाङ, बाजुरासहित सुदूरपरिश्चमका भक्तालुजनको भिड लाग्छ । पर्यटकीय सम्भावना बोकेका कोइकी हिमाल, कान्जीरोवा हिमाल, तालतलैया, बौद्ध गुम्बालगायत पर्यटकीय क्षेत्र पनि यहाँ छन् । त्यसैले भौगोलिक विकटताले यहाँका सम्भावना ओझेलमा परे पनि सबै फाइदाका विषय छन् ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा हामीले योजना बाँडफाँट गरेका छैनौं । अन्य स्थानीय तहमा त्यस्तो प्रवृत्ति होला । हाम्रो पालिकामा त्यस्तो छैन । समान तरिकाले आवश्यकताका आधारमा विकासका योजना बाँडेका छौं । र, योजना बाँडफाँटमा स्थानीयको पनि उत्तिकै उपस्थिति हुन्छ । विकास निर्माणको छनोटमा जनता आउनु पर्‍यो । किनभने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले योजना छनोट तथा वितरण गर्दा स्थानीयको भेलाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुरुप हामीले काम गरेका छौं । गाउँस्तरमा योजना छनोट गर्नुपूर्व के समस्या छ ? त्यो त त्यहाँकै जनतालाई थाहा हुन्छ । सोहीअनुसार विकासका योजना बाँडफाँट गर्ने हो । स्थानीयको उपस्थितिबिना कुनै पनि काम सम्भव छैन । गाउँपालिकामा जति विकास भए, त्यो जनताको इच्छा र चाहनाअनुसार भएको छ । बजेट थोरै होला । काम ढिलै होला । तर स्थानीयवासीको इच्छाअनुसार भएको छ ।